Google Earth - Peeji nke 15 - Geofumadas
Google na-akwụ $ 10 maka azụmahịa ọ bụla
Google enyela $ 10 iji were foto nke azụmahịa ma tinye data azụmaahịa na Google Maps. Ozugbo Google buliri data gị ma kwado ya, ị ga-enweta $ 2, mgbe ahụ ị ga-enweta $ 8 mgbe azụmaahịa ahụ kwadoro na data ahụ ziri ezi. N'ụzọ dị otú a Google na-ahụ na kwa ụbọchị ndị mmadụ ...
Google Earth / Maps, Nkwado Blog
NAD 27 ma ọ bụ WGS84 ???
Ọ bụ ezie na oge ụfọdụ gara aga thelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ala na Latin America mere mgbanwe na gọọmentị wGS84 dị ka atụmatụ tozuru etozu, mgbanwe n'ọkwa ojiji dị obere. N'ikwu eziokwu, amụma ahụ na-adị mgbe niile ma mgbanwe ahụ enweghị ike ịpụta na Datum dị n'etiti NAD27 na NAD83, agbanyeghị na ihe ọ pụtara bụ ...
Map na Georeferencing na Google Earth
Maapụ ochie ndị ahụ, ụfọdụ n'ime ha na-ewe obere ọchị, ọkachasị mgbe anyị jikọtara ha na ngwa ọrụ eserese dị ugbu a, agbanyeghị ọ bụrụ na anyị tụlee etu esi mepụta eserese ndị ahụ n'oge ọ na-enweghị onye jisiri ike fee, anyị kwenyesiri ike na etu ndị na-ese foto si nka. Nke a bụ maapụ Central America, site na ...
Na Argentina, ha ga eji Google Earth gbochie iwepụ ụtụ isi
Dabere na akụkọ akụkọ bipụtara na AFP, ndị isi ụtụ isi nke mpaghara Buenos Aires ga-eji Google Earth, iji chọọ ụlọ ndị ekwupụtaghị na akụ. Maka ndị anyị bụbu onye na-elekọta ngalaba Cadastre na ime obodo, anyị maara na ndị mmadụ enweghị ...
Google Earth maka ejiri eme ihe?
Dabere na ụfọdụ nkọwa na ụfọdụ blọọgụ, ọ dị ka Google Earth's akporo ga-agafe karịa ebumnuche websaịtị mbụ; dị otú a bụ ihe gbasara ngwa ndị a na-agbado na mpaghara cadastre. Diario Hoy, nke obodo Mar de Plata biputara ikpe, nke ...
Kedu ka ụwa Google anyị si gbanwee?
Tupu Google Earth dịrị, ikekwe naanị ndị ọrụ nke usoro GIS ma ọ bụ ụfọdụ encyclopedias nwere echiche zuru oke nke ụwa, nke a gbanwere kpamkpam mgbe ọbịbịa nke ngwa a maka ndị ọrụ usentanetị ọ bụla (E nwere Virtual Earth mana ọ bụghị maka ide ), bu ezigbo egwuru egwu sitere na nnukwu Google, emere ...
blog Google Earth gps kml manifold GIS My mbụ echiche
ArcGIS-ESRI, Cartografia, Google Earth / Maps, Internet na Blogs, manifold GIS, mbụ echiche, Video, virtual Earth